Ogaden News Agency (ONA) – Tigreega oo Gu’itaan Udiyaar Garoobay & Rajadoodii oo Dhamaatay.
Tigreega oo Gu’itaan Udiyaar Garoobay & Rajadoodii oo Dhamaatay.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Maqale ee xarunta Gobolka Tigrey ayaa sheegaya in qoomiyada Tigreegu ay si wayn ugu diyaar garoobayso isbadalada lafilayo iyo burburka soo wajahay wadanka gumaysiga Itoobiya.
Sida xogta aan kuhelayno saraakiisha talada wadanku ay ka go’do ee qoomiyada Tigreega udhalatay ayaa go’aan saday in ay dhamaan qalabka muhiimka ah ee xukuumada wayaanaha geeyaan Gobolka Tigreega ee woqooyiga Itoobiya.
Talaabadan noocan ah ayaa imanaysa xili ay saraakiisha Tigreegu ka samreen siihaynta talada wadanka, waxaana lasheegayaa in ay saraakiisha Tigreegu garwaaqsadeen marxalada uu wadanku marayo iyo sida aysan waxba uga qaban karin.
Saraakiisha qoomiyada Tigrey ayaa sidaan horay idiinku sheegnayba Gobolka Tigrey geeyay raadeelo iyo qalab kale oo muhiim ah oo ay kujiraan hubka culculus iyo matooro aad uwaawayn oo kuwa korontada ah, kuwaas oo loogu talagalay in lagu difaaco Gobolka burburka kadib.
Warkan cusub ee hada laga helayo Gobolka Tigreega ayaa sheegaya in ay saraakiisha Tigreegu Gobolka geeyeen hub kale oo dheeraad ah, saliid, raashin aad ubadan iyo qalab kale oo dagaalka iyo sahaydaba muhiim u ah.
Arintan ayaa umuuqata diyaar garawgii ugu dambeeyay ee qoomiyada Tigreegu ay ugu jirto sidii ay ugu gu’i lahayd wadanka intiisa kale kadib markay soo idlaatay rajadii ay kaqabeen in ay wadanka sii maamulaan.